Vestibular စနစ်, ကျနော်တို့အာကာသအတွင်းပဲ့ထိန်းထားရန်လိုအပ်ပါသည်။ သူ့အလုပ်ချိုးဖောက်လျှင်, လူတစ်ဦးမူးဝြေခင်းတွေ့ကြုံ, တဦးတည်းအပေါ်ဟန်ချက်မျှအောင်ပြုလုပ်ပေးခြင်း, တခါတရံတွင်နှစ်ပေ, သူစစ်ဆေးရေးစဉ်အတွင်းအများအပြားနှောက်နှင့်အာရုံကြောပါရဂူရောင်ပြန်ဟပ်လိမ့်မည်သည့်မူလတန်းစမ်းသပ်မှု, မလွန်ပါဘူးလို့မရပါဘူး: သင်သည်သင်၏မျက်စိပိတ်ဖို့နှင့်နှာခေါင်း၏အစွန်အဖျားရန်သင့်လက်ချောင်းကိုမထိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
Vestibular စနစ်သည်ဦးနှောက်နှင့်ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်၏အမျိုးမျိုးသောရောဂါများအတွက်နှောင့်အယှက်စေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်သူ့အလုပ်၏ချိုးဖောက်မှုအများဆုံးအကြောင်းရင်းမှာဖြစ်ပါတယ် IRR ။
vestibular ယန္တရားလေ့ကျင့်အသက်တာ၌များစွာသောဒုက္ခကိုရှောင်ရှားရန်ခွင့်ပြုသည်: ဥပမာ, ဝိုင်းလေးပေါ်တွင်စီးနင်း, ရှည်ဘတ်စ်ကားပေါ်တွင်စီးနင်းအဖြစ်မြန်နှုန်းမြင့်ဓာတ်လှေကားပျို့ခြင်းနှင့်မူးဝြေခင်းတစ်ခံစားမှုဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
အဆိုပါ vestibular စနစ်ကိုအားကောင်းရန်ဘယ်လိုနေသလဲ?
အဆိုပါ vestibular ယန္တရား၏ညံ့ဖျင်းသောစွမ်းဆောင်ရည်အစဉ်အမြဲပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးနေမကောင်းသည်အဘယ်အရာပြောပါတယ်မဟုတ်ပါဘူး။ အမှန်မှာဤခန္ဓာကိုယ်လေ့ကျင့်သင်ကြားခံရဖို့လိုသည်, ထို့ကြောင့်၎င်း၏အောင်မြင်မှုပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတက်ကြွဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လောက်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။
သူ Spatial တိမ်းညွတ်ခြင်းနှင့်လှုပ်ရှားမှုများအတွက်တာဝန်ရှိသည်အဖြစ် vestibular ယန္တရား, လေ့ကျင့်ခန်း၏အကူအညီဖြင့်လေ့ကျင့်သင်ကြားရန်လိုအပ်ပါသည်။
LFK သုံးပြီး vestibular ယန္တရား၏ပြန်လည်ထူထောင်ရေး
အဆိုပါ vestibular ယန္တရားလေ့ကျင့်ပေးရန်အရှိဆုံးပုံမှန်အတိုင်းလမ်း - ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုထုံးအတွက်ပါဝင်နေသည်။ မိုးသည်းထန်စွာဝန်ကိုဆီးတားရန်အဖြစ်ကြားနေအားကစားသငျသညျကိုယျခန်ဓာကိုပွငျဆငျဖို့လိုအပျ, အသီးအသီးမှမသွားနိုင်ပါ။ ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဆောင် - ဘုစပတ်သစ်သား, ဆိတ်ကွယ်ရာမိမိလက်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်လှည့်များနှင့်သင်တန်း - ဦးခေါင်းလှည့်။
စနစ်တကျတစ်ခုသောနေရာ၌ဦးခေါင်း၏အလှည့်များ၏အဆုံးလွှဲပြောင်းရန်ကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကြွက်သားတွေရန်လိုအပ်ပါသည်ခိုင်မာတဲ့ခဲ့ကြသည် - ဒါမှမဟုတ်ဦးခေါင်းကိုလည်ရန်စတင်နိုင်ပါသည်နှင့်ဖြစ်ပွားမှုအန္တရာယ်ကို 99% ညီမျှသည်။ ဒါကြောင့်အဓိကအုပ်ချုပ်မှုကို - တစ်ခုလုံးကိုခန္ဓာကိုယ်လေ့ကျင့်ပေးဖို့, နဲ့အလင်းပေးစေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်အသီးအသီးကြွက်သားအုပ်စုတစ်စုအပေါ်ပုံမှန်အစည်းအဝေးစိတ်ဖိစီးမှု။
စကားမစပ်, လည်ပင်းများအတွက်လေ့ကျင့်ခန်း (ထိုဦးခေါင်းမြို့ပတ်ရထားလှုပ်ရှားမှုများကို) တစ်ဦးအထိုင်များတဲ့လူနေမှုပုံစံကြောင့်များစွာသောလူလေ့ရာယနေ့အတွက်သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာကျောရိုး၏ဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းလာ disc ကိုရောဂါအကောင်းတစ်ဦးကြိုတင်ကာကွယ်ရေးဖြစ်ကြသည်။
ယောဂ၏အကူအညီနှင့်အတူအရွယ်ရောက်သူများတွင် vestibular ယန္တရားလေ့ကျင့်ပေးဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
ယောဂ - ခန္ဓာကိုယ်အားကောင်းလာစေရန်နှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အလွန်ကြီးစွာသောလမ်း။ နှင့် vestibular အပါအဝင်အကြီးစားဝန်, ဆီးတားခြင်းငှါခိုင်ခံ့, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခန္ဓာကိုယ်။ သင်ကြွက်သားလေ့ကျင့်သောအခါ, သင်သည်ထိုသူတို့ pliable စေနဲ့အကောင်းတစ်ဦးလမ်းပိုင်းရ, အပြောင်းပြန်လှန်ကိုယ်ဟန်အနေအထားမှဆက်လက်ဆောင်ရွက်: kukkutasane (အလက်ပေါ်မှာရပ်နေ) နှင့် (သင်ကတခြား Asana ဟာကိုသုံးနိုင်သည်) sarvangasane mayurasane pinch ။ ပြောင်းပြန်လှန်လေ့ကျင့်ခန်းအားကြီးသောလက်နက်နှင့်ကောင်းမွန်သောညှိနှိုင်းအာကာသလိုအပ်သည်။ သူတို့ဟာ vestibular ယန္တရားသင်တန်းပေးခြင်းမြင့်မားချွတ်ဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်။
Asparkam - အသုံးပြုမှုအတွက်လက္ခဏာများ
မျိုးဆက်သစ်များ၏ Nonsteroidal anti-inflammatory မူးယစ်ဆေးဝါးများ
အဆိုပါသိုင်းရွိုက်ဂလင်းပေါ် cyst - ကအန္တရာယ်ဖြစ်သနည်း
တပ်ဦး - အိမ်မှာကုသမှု
အိုင်းနာ ​​- ကုသမှု
DZHVP - လက္ခဏာများ
နံ့သာဆီ Aktovegin - အသုံးပြုမှုအတွက်လက္ခဏာများ
Neurox - အသုံးပြုမှုအတွက်လက္ခဏာများ
ကြီးမားသောအူရောင်ခြင်း - လက္ခဏာတွေ, ကုသ
အဆိုပါအနုပညာရှင် 2017 ခုနှစ်ဒစ္စနေး၏မင်းသမီးနေရာချ, ဤအစဉ်အဆက်ကသူတို့ကိုမှဖြစ်ပျက်သောအကောင်းဆုံးအရာပါ!
လွမ်းဆွေးမိနျးမသ - ဝိသေသ
Myopathy - လက္ခဏာများ
အကျိုးဆက်များမပါဘဲက Man bewitch ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
ပယင်း Heard ထောင်ထဲမှာ 10 နှစ်ရင်ဆိုင်နေရ
"Twin Peak" ဖို့နောက်ဆက်တွဲ၏သွန်းအတည်ပြုခဲ့သည်!
အမျိုးသမီးတွေအတွက်အန်ဒရိုဂျင် Alopecia - ကုသမှု